Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » South Africa Airways dia nanambara ny Executive Interim vaovao
Birao fizahantany afrikanina • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Simon Newton-Smith dia nanome anarana anarana Executive Executive SAA vaovao: Ara-barotra
Simon Newton-Smith dia nitana andraikitra lehibe teo amin'ny Virgin Atlantic Airways sy Qatar Airways.
Simon Newton-Smith dia nanome anarana anarana Executive Executive SAA vaovao: Ara-barotra.
Simon Newton-Smith dia miditra amin'ny ekipa mpanatanteraka SAA any Johannesburg.
Simon Newton-Smith dia matihanina amin'ny seranam-piaramanidina manana rakitsoratra manerantany.
South Africa Airways (SAA) dia faly nanambara ny fanendrena ny veteranin'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina, Andriamatoa Simon Newton-Smith, amin'ny toeran'ny Executive Executive SAA: Varotra.
Nanatevin-daharana ny ekipa mpitarika ny ekipa afrikanina afrikanina tatsimo atsimo any Johannesburg, Afrika Atsimo i Simon miaraka amina lalam-piaramanidina iraisam-pirenena maro izay nanatevin-daharana ny SAA tamin'ny taona 2000 ary nanompo tamin'ny naha-filoha lefitra, Sales any Amerika Avaratra, izay nitarihany ny varotra, ny fanohanana ara-barotra, ny vondrona ary ny vidiny departemanta. Izy koa dia nitana andraikitra lehibe amin'ny Virgin Atlantic Airways amin'ny maha filoha lefitra, Sales any Amerika Avaratra ary Country Manager any South Africa, ary miaraka amin'i Qatar Airways ao Doha amin'ny maha filoha lefitra zokiolona azy, Strategy ara-barotra.
South African Airways'Tale jeneralin'ny vonjimaika, Thomas Kgokolo, dia mamaritra an'i Simon ho matihanina amin'ny fiaramanidina efa za-draharaha miaraka amin'ny rakitsoratra manerantany momba ny fitakiana fidiram-bola mahomby ary manampy ny lanjan'ireo mpanjifa amin'ny sehatry ny fifaninanana, sarotra sy mivoatra haingana. Simon koa dia nanampy betsaka ny tanjaky ny ekipa mpanatanteraka isan-karazany sy efa za-draharaha - izay efa vonona sy vonona hitondra an'i SAA ankehitriny. Izy dia mitondra traikefa manan-karena izay hitondra tombony lehibe ho an'ny SAA sy ireo mpanjifantsika ary mpiara-miombon'antoka amin'ny varotra manerana izao tontolo izao.
“Faly be aho miditra amin'ny SAA satria manomboka toko vaovao amin'ny tantaran'ny sidina afrikanina tatsimo. Ity dia mpitatitra manana razambe manankarena sy saro-piaro eran'izao tontolo izao ary izaho sy ny ekipa mpanatanteraka dia hiasa tsy an-kijanona amin'ny ezaka ataonay handray ireo mpandeha miverina, hampitombo ny vola miditra ary hitondra tombony ”, hoy Andriamatoa Newton-Smith.